Myanmar Fonts – Xiaomi Guide
Posts tagged as “Myanmar Fonts”
Published December 3, 2018 by Thet Zaw Ko
MM Zawgyi Fonts ( TWRP / Root Method )
Published April 19, 2018 by Thet Zaw Ko
System fonts မှာ Replace လုပ်ပြီးသုံးရန်အတွက် Zawgyi font တွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲလိုလုပ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ မြန်မာစာ Zawgyi font နဲ့ပတ်သက်လို့ 98% မှန်ပါမယ်။ (2% ကတော့ Unicode font ကိုသာ by force လုပ်ပြီးသုံးတတ်တဲ့ app တွေအတွက်ထားလိုက်ပါတယ် 😀 😀 ) Requirement Magisk နဲ့ root လုပ်ထားပြီးဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှမဟုတ် TWRP သွင်းထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ်။ နှစ်မျိုးလုပ်ပေးထားပါတယ်။ MiA1 လို Google Stock Android…
MIUI9တင်လိုက်မှ Fonts တွေ Themes တွေ အရင်လိုပဲပြန်ထည့်တာ မရတော့ဘူး.. Third Party error ဖြစ်နေတယ်… Unsupported ပြန်နေတယ်.. စသဖြင့် ဖြစ်နေကြတာလေးကို ဖြေရှင်းဖို့နဲ့ သိထားသင့်တာလေးတွေပါ။ MIUI Theme Editor Themes လေးတွေ၊ Font လေးတွေကို MIUI ROM တွေမှာ ထည့်သုံးလို့ရအောင် mtz file အနေနဲ့တင်ပေးကြတယ်။ Share ပေးကြတယ်။ အဲဒါလေးတွေကို ကိုယ်ကလဲကြိုက်ရင် Download လုပ်ထားတယ်။ အရင်က ကိုယ့် Mi Account ကို Designer Account ဖြစ်အောင်ုလုပ်ထားပြီး Themes Manager app ထဲမှာပဲ…
Using Custom Fonts in MIUI 9
Published November 16, 2017 by Thet Zaw Ko
ပြောင်းလဲလာတဲ့ Xiaomi Thems Policy တွေကြောင့် Designer Account ရှိပေမယ့် customized themes, fonts တွေကို ဖုန်းမှာ ထည့်သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ သည်တော့ MIUI 8 မှာ၊ MIUI9Dev Rom တွေ ( 2017 – 11 မတိုင်ခင်ထိ roms) မှာ၊ MIUI Theme Editor app လေးကိုသုံးပြီး အဆင်ပြေအောင် ထည့်သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ 2017 NOV မှာစထွက်လာတဲ့ MIUI9Dev roms တွေနဲ့ နောက်ပိုင်း Update ပေးလာတဲ့…
New way to Apply Custom Themes & Fonts
Published July 5, 2017 by Thet Zaw Ko
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Xiaomi Theme Policy တွေပြောင်းလဲလာတောကြောင့်လားတော့မသိ။ မိမိတို့ဆီမှာ ရှိနေတဲ့ custom themes, fonts mtz file တွေကို ဖုန်းထဲမှာ import လုပ်ပြီး Apply လုပ်ရင် Designer Account ရှိနေတာတောင် Error ပြပြီး သုံးလို့မရဖြစ်လာပါတယ်။ အဲသည်အတွက် MIUI Theme Editor app လေးကို သုံးပြီး အလွယ်တကူကျော်လွှားအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ MIUI Theme Editor app ကို Google Play Store ကနေတိုက်ရိုက် download လုပ်ပြီးဖုန်းမှာသွင်းထားလိုက်ပါ။…
Myanmar Theme Fonts & Browser Problems
Published April 22, 2017 by Thet Zaw Ko
Facebook မှာ link တွေနှိပ်ဝင်ဖတ်တယ်။. Browser နဲ့လည်းပွင့်လာရော စာတွေကမမှန်တော့ဘူး…. စတာတွေက Mi Phone တွေမှာ Zawgyi Myanmar Theme Fonts တွေထည့်သုံးနေတိုင်း ကြုံနေကြရတာပါ။ ကျနော်သတိထားမိသလောက် ဖုန်းမှာပါတဲ့ Original Browser ဟာ Theme Font ကိုပဲယူသုံးပြီး Zawgyi Font တွေကိုပြပေးနေတာ ကြာပါပြီ။ သို့သော် China rom မှာပါတဲ့ Browser version, Global rom မှာပါတဲ့ version မတူကြဘူး။…
Changing System Fonts with Myanmar (Zawgyi) Fonts ( TWRP, ROOT Methods)
Published April 19, 2017 by Thet Zaw Ko
ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ System fonts တွေကို မြန်မာစာပါ ပါပြီးသား Fonts တွေနဲ့ အစားထိုးထည့်တာတွေ မလုပ်ခင် Myanmar Font နဲ့ပတ်သက်လို့ အကြမ်းဖျဉ်း သဘောတရားလေးတွေ၊ ဖုန်းက App တွေရဲ့ Fonts ယူသုံးပုံလေးတွေကို သိထားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာစာနဲ့ ပတ်သက်လို့ Unicode နဲ့ Zawgyi font ဆိုပြီး နှစ်မျိုးပြောပြောနေတာ ကြားဖူးပြီးသားဖြစ်ကြမှာပါ။ Unicode ဆိုတာ Font တစ်ခုရဲ့ နာမည်မဟုတ်ပါ။ “စံ” သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပါ။ နိုင်ငံတိုင်းက ဘာသာစကားတိုင်းအတွက် ဖုန်းတွေမှာ…
Myanmar Fonts for Mi Beginners
Published December 12, 2016 by Thet Zaw Ko
Xiaomi ဖုန်းထဲမှာ မြန်မာစာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့ China Rom ဆိုရင် တစ်မျိုး၊ Global Rom ဆိုရင် တစ်မျိုး လုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အဲသည်အတွက် ကိုယ့်ဖုန်း rom ဟာ china လား၊ global လား ဆိုတာ အရင်ဆုံး အောက်ပါအတိုင်း ကြည့်လို့ခွဲခြားပါ။ Myanmar Fonts for China ROM CHINA ROM တွေအတွက် လုပ်နည်းကို အရင်စပြောပေးပါမယ်။ Mi Account တစ်ခုလုပ်လို့ Login ကတော့…